Fanamarihana ho an'ny fiasan'ny Craft Beer Equipment-News-NingBo COFF Machines Co., ltd
Fanamarihana ho an'ny fiasan'ny fitaovana fanaovana labiera asa-asa
Fotoana: 2020-07-10 Comment: 57
Ho an'ny olona vao haingana dia misy zavatra tsy maintsy tandremana rehefa miasa fitaovana ianao. Eto, te-hizara torohevitra vitsivitsy momba ny fomba fampiasana ilay fitaovana aho:
1.Ny fitaovana labiera vita amin'ny birao dia tsy tokony ho voahodina, tsy maintsy mijoro mahitsy, ary tsy tokony hasaina ny fihetsehana.
2.Ny fitaovam-pisotroana labiera koa dia mila fikojakojana tsara. Rehefa tapitra ny labiera dia esory ny tsiro fahefatra, vonoy ny tavoahangy amin'ny tavoahangy co2 ary avereno ny bokotra fandrefesana. Ireo mpamaky labiera tsara indrindra dia fitaovana ampitaovin'ny hafanana. Aza manelingelina azy ireo fa sao potipotika mora foana izy ireo.Raha tsy ampiasaina intsony ao anatin'ny fotoana fohy dia tokony ho rarahana rano ny masinina, ary diovy ny rindrina ivelany, aorian'ny fonosana amin'ny toerana maina.
3. Ny fitaovana labiera amin'ny asa-tanana dia tokony hojerena matetika mba hikolokoloana ny haavon'ny rano sy ny kalitaon'ny rano amin'ny tanky, raha ilaina, miaraka amin'ny fanadiovana detergent manokana, avy eo kobanina amin'ny rano. Tsy avela hikasika rano ny motera, ka rehefa mikarakara ianao , tandremo sao manaparitaka rano amin'ny motera. Jereo koa matetika ny dispensera fanadiovana sy ny lohan'ny divay. Raha tsy elastika ilay gasket dia tsy maintsy soloina.
Raha manana fanontaniana bebe kokoa ianao dia azonao atao ny manamarina ny tranokalanay www.coffbrewing.com/faqs. na afaka mandefa mailaka amiko (wellish@nbcoff.com) ianao, hiezaka ny tsara indrindra hanampy anao aho.
Previous: Tombontsoa ho an'ny mpiasa sy ny mpanjifa ny kolontsaina orinasa
Next: Famokarana labiera asa-tanana - endriny mitambatra amin'ny Sistema fanamasinana - fitaovana roa-fitaovana